यौ’न स्वास्थ्यसँग जोडिएका केही सत्य र केही झूट – Jagaran Nepal
यौ’न विशेषज्ञहरु यौ’न शिक्षालाई व्यक्तिले बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै जाने शिक्षाको रूपमा चिनाउँछन् । कुनैपनि महिला र पुरुषबीचको एउटा शारीरिक सम्बन्ध मात्रै यौनसँग सम्बन्धित विषय होइन । यौनसँग सम्बन्धित कतिपय कुराहरु बच्चा जन्मिसकेका आमाबुबालाई समेत जानकारी नभएको हुन सक्छ ।यौनको बारेमा धेरै गलत हल्लाहरू हुन्छन् । यौनको विषयमा कतिपय भ्रम पनि धेरैले पालेर बसेका हुन सक्छन् । जुन भ्रम र यथार्थका बारेमा केही जानकारी दिने कोसिस गरिएको छ ।
दुईवटा क’ण्ड’मको एकसाथ प्रयोग गर्नेबारे
कतिपयमा महिनावारीको समयमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भवती हुने सम्भावना कम हुन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको पाइन्छ । तर यसमा पनि सत्यता रहेको पाइँदैन। चिकित्सकहरु यस समयमा गर्भको सम्भावना कम हुने भए पनि असम्भव भने हुँदैन ।
यौ’न’को विषयमा पुरुषहरुमा हुने गलत धारणा
सुरक्षित यौ’न सम्बन्धलाई लिएर भारतीय पुरुषहरुमा कैयौं गलत धारणाहरु आउने गर्छ । जसको सम्बन्धमा उनीहरुको मान्यता छ कि यसले एचआईभी एड्स या अन्य एसिडिटी जस्ता समस्या हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अधिकांश मामलामा पुरुषहरु क’ण्डमको प्रयोग गर्न चाहँदैनन् । यदि उनीहरुको साथमा कण्डम छैन भने उनीहरु दोस्रो तरिकाले यौन सम्पर्क गर्न चाहन्छन् । यस्तो असुरक्षित यौनसम्पर्क दुवैको लागि जोखिमयुक्त हुन्छ ।
यौनसँग जोडिएको केही तथ्य
१. शारीरिक सम्बन्ध मानसिक सुख समेत प्रदान गर्छ । यसको लागि मानसिक रुपले पनि जोडिनु जरुरी छ । २. यो सत्य हो कि समयभन्दा पहिले यौन सम्बन्ध बनाउनको लागि शारीरिक र मानसिक विकासमा धेरै प्रभाव पर्छ ।
३. विवाहभन्दा पहिले यौनको वैवाहिक जीवनमा कुनै असर हुँदैन । यो मान्न सकिन्छ कि विवाहभन्दा पहिले वैवाहिक जीवनको खुसी खोसिने समस्या हुन सक्छ । यो गलत कुरा हो ।
४ यो सही कुरा हो कि यौन सम्बन्ध एक व्यक्तिगत अधिकार हो । यसमा कुनै एकको लागि प्रतिबद्धता हुनु जरुरी छ । तर अहिले यसको महत्व कम हुँदै गएको छ ।
५. सम्बन्धमा यौनको प्राथमिकता कहिलै हुनु हुँदैन । भावनात्मक सम्बन्धका साथ–साथ आत्मीय सम्बन्ध हुनु समेत जरुरी हुन्छ । तपाईं यौनको महत्वलाई बुझ्न सकिन्छ ।